I-China ye-CPLA esekwe kwiZityalo ePlatiniki eNgenakugqitywa ukwenziwa koMatshini kunye neFektri | Gianty
I-PLA yi-bioplastic eyomeleleyo neyenziwe iswekile yesityalo. I-PLA sisifinyezo se-polylactic acid eyenziwe iswekile enje ngesitatshi sombona, umoba okanye iswekile yeswekile. Umbona wombona sesona sisityalo siphambili ngoku xa sele sikhulile kusetyenziswa iindlela zokulima ezinje ngoku:
Ukunciphisa ukusetyenziswa gabalala kwezibulala-zinambuzane kunye namanzi
Ukungafunisi umhlaba onezinto ezahlukeneyo zenzululwazi okanye iindawo eziphakamileyo zekhabhoni.
Ukuthintela iinkqubo zolimo ezimaxongo.
Ukulawulwa kokukhutshelwa kwomoya ovelisa ubushushu kwifama.
Ukulandela imithetho engqongqo yabasebenzi.
Ukukhusela indalo-nkqubo yendalo ejikeleze umhlaba.
Ezi zikhabi zekofu kufanelekile ukuba zisetyenziselwe ikofu kunye needayisi ezincinci. Le isipuni se-ice cream kufanelekile ukuyisebenzisela i-ice cream kunye neeshukela ezincinci. Isetyenziselwa iisampulu okanye ukunambitha. Le foloko yamazinyo ilungele ukusebenzisa isoseji okanye amaqanda athosiweyo.
I-SGS yinkampani yamazwe aphambili e-Geneva, eSwitzerland ebonelela ngeenkonzo zokuhlola, zokuqinisekisa, zokuhlola kunye nezokuqinisekisa. Iinkonzo eziphambili ezinikezelwa yi-SGS zibandakanya ukuhlolwa kunye nokuqinisekiswa kobungakanani, ubunzima kunye nomgangatho weempahla ezithengisiweyo, ukuvavanywa komgangatho wemveliso kunye nokusebenza ngokuchaseneyo nezempilo ezahlukeneyo, ezokhuseleko kunye nemigangatho yolawulo, kunye nokuqinisekisa ukuba iimveliso, iinkqubo okanye iinkonzo ziyahlangabezana Iimfuno zemigangatho ebekwe ngoorhulumente, imigangatho yokubekwa emgangathweni okanye abathengi be-SGS.
Into I-CPLA 5 yesipuni yekofi
Umbala Mhlophe. Mnyama.Colored
Ubalo lweCarton Ziyi-2000 iipcs
Ubungakanani bebhokisi 27 * 27 * 19.5cm
Into ICPLA Ice-cream Isipuni
Ubungakanani bebhokisi I-24 * 24 * 16cm
Into I-CPLA Saw Izinkuni ngefoloko
Ubungakanani bebhokisi 35 * 14 * 18.5cm
Edlulileyo: ICPLA esekwe kwiPlatinic engasetyenziswanga yiplasitiki engahlawulelwanga ezi-6 ze-intshi
Okulandelayo: I-CPLA + i-bamboo esekwe kwiZityalo engasetyenziswanga ePlasitiki engenasici isi-7 ye-intshi